Maxay yihiin dusha sare ee qorraxda 'Tesla' sidee bayse u shaqeeyaan? Cusbooneysiinta Cagaaran
Saqafyada Cadceedda ee Tesla
Tesla waa shirkadda leh heer sare oo heer sare ah tikniyoolajiyadda jarista iyo horumarinta ifafaale weyn adduunka. Waxay leedahay heerka ugu sareeya ee heer sare ee gawaarida korontada waxayna hadda abuurtay taariikh tiknoolajiyadeed iyo tayo waarta oo ujeedadeedu tahay in lagu faafiyo adduunka. Waxay ku saabsan tahay Saqafyada qoraxda ee Tesla. Saqafyadaan waxaa loogu talagalay inay ku shaqeeyaan tamarta qorraxda ee loo yaqaan 'photovoltaic tamarta qorraxda' waxaana loogu talagalay in lagu yareeyo qiimaha bilowga ah oo ay la socoto shaqaalaha si loo helo faa'iidooyin wanaagsan iyo waxqabad sare.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa waxa ay yihiin saqafyada qorraxda ee Tesla, sida ay u shaqeeyaan iyo waxa loogu talagalay.
1 Saqafyada Cadceedda ee Tesla
2 Astaamaha ugu muhiimsan
3 Faa'iidooyinka saqafyada Tesla Solar
Elon Musk waa agaasimaha guud ee shirkadda 'Tesla Motors' wuxuuna magacawday saqafyada qorraxda 'Tesla' magaca Solar Glass. Ujeedada ninkaan ayaa ah inuu dhigto 1.000 ka mid ah saqafafkan guud ahaan Mareykanka kahor dhamaadka sanadkan. Waa tiknoolajiyad aad u horumarsan oo soo bandhigeysa hoos u dhac weyn oo ku yimid qiimaha, rakibida iyo kharashka dayactirka. Gaar ahaan, waxay kaa caawineysaa inaad badbaadiso 40% qiimaha saqafyada kale oo leh hawlgalka tamarta qorraxda ee sawir-qaadaha.
Saqafkan cusub ee qoraxda leh ayaa leh cimri dhan 30 sano, sida waqtigiisa damaanad Waana in taayirradeedu ay awood u leeyihiin inay ku daydaan saqafka bullaacad ahaan sidii wax dabiici ah. Si dhakhso leh oo nabadgelyo leh ayaa loo rakibay, sidaa darteed, wax walba waxaa loo tarjumayaa badbaadin weyn heerka. Qareenada Tesla waxay si isdaba joog ah u codsadeen patent si ay u awoodaan inay hoos u dhigaan una dimoqraadiyeeyaan sheyga oo ay u dhisaan iibsiyo si nabadgelyo iyo dhaqso leh
Foornooyinkaas oo ka kooban saqafka sawir-qaadista waxay leeyihiin xiriir cusub oo wax-ku-ool ah oo ka dhexeeya taararka sawir-qaadaha. Waxay ka samaysan yihiin muraayad qabow sidaa darteed waxay hubiyaan dhawr iyo toban sano oo cidhiidhi ah tabar la'aan sida ay tahay maalinta koowaad. Wareeggan awoodeed waa mid aad u dheer sidaa darteed waxay u oggolaan kartaa saqafku inuu socdo illaa 30 sano. Thanks to noloshan waxtarka leh ee dheer, waxay noo ogolaaneysaa inaan si dhaqso leh ugu soo ceshano maalgashigii ugu horeeyay. Sidoo kale, waa in lagu sheegaa taas 40% hoos u dhaca qiimaha labadaba rakibida, maaddaama dayactirka guud uu kaa caawin karo inaad dib u soo celiso maalgashigaaga sida ugu dhaqsaha badan.
Xitaa haddii caddaynta nolosha la dedejiyo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah waxaa jira ugu yaraan waqti lagu sameeyo. Dhib malahan roobka, xaaladaha cimilada ee ay awood u leedahay inay ka hortagto daadadka, roobabka roobka, iyo xaaladaha kale ee jawiga xun. Waxay awood u leedahay inay qabato kubbadaha barafka ilaa 5 sentimitir dhexroor saameyn ku yeelan kara xawaare dhan 160 kiilomitir saacaddii.
Mid ka mid ah astaamaha ugu waa weyn ee hagaajin kara waxqabadka saqafyada qorraxda ee Tesla ayaa ah in lagu dari karo lana awoodsiin karo qiiqyada iyo daaqadaha ka caawin kara iswaafajinta gogosha taayirrada iyadoon wax saameyn ah ku yeelanaynin waxqabadka. Baytariyada Powerwall ee ay soo saartay Tesla waxay u oggolaaneysaa iyaga in lagu rakibo saqafyada sare ee qorraxda habkaas oo kale Waxaan dammaanad ka qaadeynaa in la helo koronto haddii ay dhacdo wax goyn ama mugdi ah.
In kasta oo tiknoolajiyaddu ay aad uga horumarsan tahay moodooyinka kale ee duugga ah, haddana waa in aynaan iloobin mabaadi'da isticmaalka tamarta sawir qaadeyaasha. Haddii aag aysan ku oollin qaddar badan oo shucaaca qorraxda ah si isdaba joog ah, uma isticmaali karno tan bidix qaab faa'iido leh.
Isbarbardhiga muraayadda qorraxda leh qaabkii hore ee saqafka qorraxda ee V3, sidoo kale laga keenay Tesla, waxaan aragnaa kuwa soo socda. Haddii aan leenahay a saqafka 100 mitir laba jibbaaran kaas oo aan ku hayno 60% dusha saqafka nooca qoraxda sawirada (Waa tirada uu ku taliyo Tesla) iyo batteriga Powerwall ee kaydiya tamarta, waxay yeelan doonaan wadar dhan qiyaastii 45.500 euro. Sida iska cad, tani waa jaantus sare oo ku filan oo dadka oo dhan aysan wada bixin karin, aad ayey uga yar yihiin kuwa gaarka loo leeyahay. Sababtaas awgeed, kacaankan tikniyoolajiyadeed wuxuu ka dhigan yahay in maaddadan lagu sii hayn karo gudaha Spain iyada oo loo sii marayo websaydhka Tesla oo keliya 1.000 yuuro ka hor.
Dad badan ayaa la yaaban farqiga u dhexeeya naqshadaha dhismaha saqafka caadiga ah ee leh saqafyada qorraxda ee Tesla. Waana inay tahay naqshad ka caawinaysa kaabayaasha naqshadaha gurigaaga sidii loo caawin lahaa in qorraxda loo beddelo koronto. Faa'iidadaani waxay ku siin kartaa faa'iidooyinka is-isticmaalka iyo yareynta biilka korantada. Maxaa intaa ka badan, Waxay ka caawin doontaa dhowrista deegaanka tan iyo markii aynaan ka soo saari doonin gaasaska aqalka dhirta lagu gubo ee shidaalka. Thanks to batteriga Powerwall ee ku dhex jira, tamar ayaa la ururin karaa maalintii oo la kaydin karaa si loo isticmaalo wakhti kasta inta lagu jiro habeenkii. Sidan oo kale, waxaan gurigeenna uga beddeleynaa wax ka waxtar badan.
Faa'iidooyinka saqafyada Tesla Solar
Waxaa jira qaabab kala duwan oo naqshadeynta ah oo ay bixiso Tesla. Thanks to moodooyinkaas waxay u oggolaanayaan macaamiisha inay helaan xulasho yar oo macno leh sida saqafku u ekaan doono. Tani ma lahayn saqafyadii hore ee qorraxda tan iyo markii ay jireen moodallo badan. Hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed waxay sidoo kale leedahay is-dhexgal aan kala go 'lahayn oo u dhow qaab dhismeedka casriga ah. Tani waxay ka dhigeysaa xulasho wanaagsan milkiileyaasha doonaya inay maalgashadaan saqaf cusub iyo tamar nadiif ah isla waqti isku mid ah.
Foornadaani muraayadaha ah waa kuwo aad u waara oo loo damaanad qaado nolol adeeg dheer. Qiimuhu aad ayuu ugu sarrayn karaa dadka qaarkood ee raba inay ogaadaan qiimaha saqafka guud. Celceliska cabirka guri ku yaal Mareykanka badiyaa qiyaastii waa 230 mitir murabac. Marka loo eego xisaabinta Tesla, saqafka cusub ee qorraxda ayaa ku kici doona qiyaastii 50.000 oo euro, isagoo leh 70% saqafka, dusha cadceedda. Shirkadda ayaa sidoo kale kugula talinaysa in la iibsado batteriga Powerwall-ka dheeriga ah oo qiimihiisu yahay 6500 euro.
Waa run in siciradan oo dhan cabsi gelin karaan macaamilka marka hore. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira noocyo kala duwan oo iibsashada saqafkan waxayna yareyneysaa qiimaha biilka korantada dhamaadka bisha. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad mustaqbalka keydiso oo aad joojiso wasakheynta hawada u sii deyso.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto saqafyada qorraxda ee Tesla.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Qoraxda Photovoltaic » Saqafyada Cadceedda ee Tesla